15 Colors Eyeshadow Palette Makeup, Yakakwirira Rangi, Isina Mvura & Yakareba-Yakareba Professional Makeup Matte Nudes Shimmer Natural Eyes Shadow Nyore ku Blend.
Chekutanga one:Nguva Yakareba Kushandisa: Uchishandisa ichi chinhu, chichagara pane chese zuva. Uine mavara akasimba uye akareba anogara, chengeta yako yakakwana eyeshadow yekugadzira kwenguva yakareba.
Multi functional cosmetic disc - JOYO yemumvuri dhisiki ine gumi nemashanu mhando dzeakakwira kuita kweziso mumvuri shanduko, kusanganisira 5 ruvara pearlescent uye gumi nemasikirwo echisikigo matte. Bold, kwazvakarerekera, kumira kana kusanganisa.
Chechipiri chekutanga:15poda yeuvara,Uchishandisa iwo anowanzo shandiswa mumvuri, inovimbisa yakanakisa yeganda ruvara mechi uye zvakasikwa kupera. Iyo iri mune yemhando yepamusoro uye ine mabasa akasiyana siyana uye iri nyore kushandisa nyore nyore kuisa, zviri nyore kushandisa neyekuvanza brashi, inosanganisika kwazvo kugadzira mumvuri waunoda.
Mavara anogara kwenguva refu, ane mavara mazhinji uye akasimba mavara, anochengetedza akakwana mumvuri weziso. Nyanzvi yekugadzira mifananidzo inoratidzira kuisa toni yeganda iri padhuze neganda, kubva pamutsara weyelash kusvika pahuma pfupa, kuitira kuti ive nechokwadi chekubatanidza musono kwese mimvuri yeziso. Pinki uye tsvuku uye nezvimwe.
Chekutanga vatatu:Kudya kwemanheru pigmented Imwe neimwe palette iri nyore inovakwa eyeshades yakashandisirwa kune yega ganda toni, ahighly pigmented, yakasimba adhesion. Yakareba, ye8-awa yekupfeka iyo isingadzime, mvura-chiratidzo, chengetedza rako rakaringana mumvuri weziso kwenguva refu.
Chechina chekutanga:Professional muraraungu palette, uyu ruvara ziso mumvuri ndiro ine 18 yakajeka mavara kubva wepepuru kuenda kune inopenya pink, nezvose zvinodiwa kuti uende kune eyelids. Iri rakanyanya pigmented mumvuri disc richakubatsira iwe kugadzira iyo inoratidzika kutaridzika chitarisiko.
Kunogara kwakadzivirira mvura: inogara ruvara, yakajeka maziso mumvuri, yakapfeka kupfeka uye nyore kuchenesa. Yedu Eyeshadow ndiro iri nyore kwazvo kushandisa (muchokwadi, zvakanakisa kushandisa zvigunwe panzvimbo pemabhurashi).
Mhando dzakasiyana dzesarudzo dzaunosarudza kubva: zviri nyore kwazvo kuzora, zviri nyore kusanganisa, zvichikupa kuita kusingaenzanisike uye nyore. Nyanzvi yehupfu fomula yakatsetseka, gadzira maziso-ekubata kana ezuva nezuva kutaridzika. Uyu mumvuri weziso mumvuri weziso unogona kuiswa kumeso.
Gadzira risingagumi make-up, inokodzera nguva dzakasiyana, senge mazuva ese ekugadzira-seti, make-up, play play make-up mhinduro, uye kunyange Holiday make-up. Chipo chakakwana chevasikana, vakadzi, vakadzi, zuva rekuzvarwa, Kisimusi, zuva raamai, zuva raValentine, nezvimwe
Pashure: Maziso ekugadzira-BD15-KOODZIRA
Zvadaro: Meso ekugadzira-BD-Blush
Ndarama Ziso Makeup
Halloween Yemaziso Makeup
Nyore Maziso Makeup
Smokey Ziso Makeup
JOYO © All Kodzero Dzakachengetedzwa. Zvinowanikwa Zvigadzirwa, Sitemap, Mini Lipstick, Yakanakisa Makeup Brushes, Shimmer Lipstick, Yakanakisa Cream Eyeshadow, Ndarama Ziso Makeup, Matte Eyeshadow Palette, Zvese Zvigadzirwa